Ogaden News Agency (ONA) – Filim: Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya ee Wadanka Finland oo Ka Qeyb-gashay World Village Festival
Filim: Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya ee Wadanka Finland oo Ka Qeyb-gashay World Village Festival
Warbixintii Jaaliyada Ogadeniya ee Finland:
sawiraanti barnaamijkan waxaad ka daalacan kartaa: guji meeshan hoose
Ogaden World Village Vestival
Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya ee Wadanka Finland oo Ka Qeyb-gashay World Village Festival
Magaalada Helsinki ee caasimada wadanka Finland waxaa ka dhacay bandhig aad u weyn oo la yiraahdo World village festival kaas oo sanad walba hal mar xilligan oo kale ka dhaca wadanka Finland. Bandhigan ayaa socday mudo labo maalmood ah oo kala ah Sabtida iyo Axadda 26 – 27.05.12.
Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya ee wadanka Finland ayaa sanadkan ka qeyb-gashay bandhigan ama Festival-kan. Jaaliyadda ayaa soo bandhigtay cuntooyinka iyo cayaarta hiddaha iyo dhaqanka Ogadenya oo ay kamid tahay Ciyaarta Dhaantada.
Waxaa xusid mudan in goobtii jaaliyaddu ay ku laheyd bandhiga ay aheyd mid kamid ah meelaha loogu xiisaha badnaa ee dadku ay hor-buuxeen. Cayaarta hiddaha iyo dhaqanka Ogadenya ee Dhaantada oo ay cayaarayeen wiilal iyo gabdho dhalinyaro ah oo ku labisnaa dhar aad u qurux badan oo ah dharka dhaqanka Ogadenya ah ayaa soo jiitay dadkii isugu soo baxay Festival-ka oo aad uga helay isla markaana aad u xiiseynayay cayaarta Dhaantada ah ee dhalinyaradu ay cayaarayeen.
Goobta jaaliyadda ay ku laheyd bandhigga waxaa soo booqday safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Ruushka danjire Max`ed Max`ud Xandulle oo dhalinyarada Ogadenya ka codsaday inuu sawir la galo. Sidoo kale, waxaa jaaliyadda soo booqday wariye-yaal u dhashay wadanka Finland iyo kuwo ajnabi ah oo codsaday in sharaxaad iyo warbixin laga siiyo Ogadenya.
Madaxa abaabulka bandhiga World Village Festival u qaabilsan jaaliyadda Ogadenya mudane Abdullahi Abdishukri ayaa weriye-yaasha iyo sidoo kale dad badan oo aad u xiiseynayay Ogadenya siiyay warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda iyo Juqraafiga Ogadenya.
Bandhigan oo ay ka soo qeyb-galeen ururo, shirkado iyo haayado kor u dhaafaya 150, ayaa waxaa sanadkan 2012 ka soo qeyb-galay Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya iyo jaaliyadda Somaliland ee wadanka Finland.